दुईजना संक्रमित हुँदा लकडाउन घोषणा गर्ने, ४४ सय संक्रमित हुँदा लकडाउन खोल्ने ? – Shirish News
दुईजना संक्रमित हुँदा लकडाउन घोषणा गर्ने, ४४ सय संक्रमित हुँदा लकडाउन खोल्ने ?
नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित माघ ९ गते पुष्टि भएको थियो । चीनको वुहानबाट आएका जनकपुरका एक विधार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी एक महिनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका थिए ।दुई महिनापछि फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीमा चैत पहिलो साता कोरोना संक्रमण देखियो । उनी कतार एयरवेजमा दुबई हुँदै आएकी थिइन् । चैतको पहिलो सातासम्म नेपालमा दुईजना संक्रमितमध्ये एक निको भइसकेका थिए ।अर्कोको आइसोलेसनमा राखेर उपचार हुँदै थियो । तर, सरकारले एक हप्ते लकडाउनको निर्णय गर्यो ।
दुई सातासम्म नेपालमा कडा लकडाउन भयो । त्यसबेला तीन–चारजना मात्र संक्रमित थपिएका थिए । तर, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशव्यापी लकडाउन कडा बनाइयो । मानिसलाई सडकमा हिँड्न दिइएन । अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारियो ।
तर, अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन तीव्र बढिरहेको छ । हालसम्म ४४ सय संक्रमित भइसकेका छन् । तर, सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । जतिबेला थोरै संक्रमित थिए, त्यतिबेला लकडाउन कडा पार्ने, अहिले ४४ सय संक्रमित पुगेपछि लकडाउन खुकुलो बनाउने भन्दै महोत्तरी जिल्ला ने.बि.संघ अध्यक्ष आशुतोष झा ले सरकारको आलोचना गर्न थालेको छ ।
अहिलेसम्म पुष्टि भएका कोरोना संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली पछिल्लो समय भारतबाट आएका रहेको पाइएको छ । सरकारले बिहीबारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेपछि सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेको छ । मान्छे सडकमा हूलका हूल निस्किन थालेका छन् ।
(झा महोत्तरी जिल्ला ने.बि.संघ अध्यक्ष हुन् )
भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोसेपछि सर्लाही सीमामा तनाव, प्रहरीद्वारा गोली प्रहार ,एक जनाको मृत्यु